IIREKHODI ZESOHLWAYO SE-NFL NJE IFLEGI EBOMVU YE-OAKLAND RAIDERS-IENDABA ZEMERCURY - IINDABA
Iirekhodi zesohlwayo se-NFL nje iflegi ebomvu ye-Oakland Raiders
Amathuba yimbali iya kwenziwa ngexesha elithile O.co I-Coliseum ngeCawa, nangona umzuzu uya kudlula ngaphandle kokufakwa kwibhodi yamanqaku okanye ukhankanywe ngummemezeli wedilesi yoluntu.
Ngaphandle kokuba kukho utshintsho olukhulu kwindlela abahlaseli abaqhuba ngayo ishishini labo, baya kungena kwiincwadi zerekhodi njengeqela le-NFL elinezohlwayo ezininzi kwixesha elilodwa, kunye nezona zigwebo.
Ngezohlwayo ze-155 kwiiyadi ze-1,294, i-Raiders ibonakala njengezitshixo zokugqithisa iirekhodi ezikhoyo zezohlwayo ze-158 kunye neeyadi ze-1,304, ezibekwe yi-Kansas City Chiefs kwi-1998.
Izohlwayo ezine kunye neeyadi ze-penalty ze-11 - uchungechunge olubi kwezinye iimeko ze-Raiders ze-2011 - zonke zihlukanisa i-Oakland kwi-flag infamy xa ibamba iSan Diego Chargers kunye nethuba le-AFC West isihloko okanye i-wild-card berth kumgca. kuba Oakland.
Umqeqeshi weRaiders u-Hue Jackson, owathi kumatyeli aliqela ngexesha lenkampu yoqeqesho kunye nesizini eqhelekileyo wafunga ukuba uza kuyilungisa le ngxaki, khange alahle ithemba kodwa kubonakala ngathi uyawuqonda lo mbandela usiba nzulu kunokuba wayecinga ngeqela elingene esikweni xa lisiza. ekwaphuleni imithetho.
Andinayo impendulo, ngokucacileyo, watsho. Ndithetha neqela ngalo lonke ixesha. Ndiyakhwaza. Ndiyakhala. Ndiyagrogrisa. Ndenze yonke into. Ndifumana intaphane yeeleta ezivela kubantu bendixelela ezinye izinto endifanele ndizame ngazo. Kwaye ndicela ungandithumeli ezintsha, kuba ezo zinto azisebenzi.
Iqela lamagosa asekuhlaleni belikwiziko leqela ngoLwesithathu, kanye njengoko bekunjalo kulo lonke uqheliselo kule sizini. Amagosa aphosa iiflegi ngenxa yeempazamo, kwaye isishwankathelo esichwetheziweyo sibekwe kwidesika kaJackson yonke imihla.
Yeyokuqala kwimbali yeklabhu, kwaye uJackson akanalwazi ngalo naliphi na iqela elakhe lasebenzisa amagosa kulo lonke uhlobo lokuziqhelanisa isizini yonke.
Sifumana umndilili wabathathu okanye abane xa siziqhelanisa, utshilo uJackson. Emdlalweni, sikwi-avareji ye-10, nokuba yintoni na. Inani nje elingakholelekiyo. Kuya kufuneka siqhubeke nokujongana nayo, kwaye siyakwenza njalo.
Ukuhlasela okuzikhuselayo uTommy Kelly uthe abadlali bafake ingqayi enkulu kwidesika yegumbi leentlanganiso ngemali, izohlwayo ezizibekele yona ye-100 yeedola ngesohlwayo ngasinye.
Ebuzwa ukuba ingaba izohlwayo zibuhlungu na, uKelly uthe, ndicinga ukuba zenzile. Baye bagcina iidrives ziphila kwaye banceda amaqela ukuba ahlale ebaleni.
Nangona iinombolo zezohlwayo zalo nyaka ziza kubeka umgangatho omtsha, yingxaki endala ye-franchise. I-Raiders sele iholele i-NFL kwizohlwayo ze-16 ngamaxesha kunye neentlawulo ze-13 amaxesha.
Ngoxa uJackson ebambelele ngokuqinileyo kumbono woluntu ukuba abahlaseli babefumana into ababeyifanele kumagosa, waxela ngokulandela ukuphumelela kwe-27-21 eMinnesota ngoNovemba 20 ukuba kukho imiba yobulungisa apho iqela lakhe lichaphazelekayo.
Ngethuba lalo mdlalo, ngelixa i-Raiders ibethelwa ngezohlwayo ze-12 kwiiyadi ze-117, i-quarterback uCarson Palmer weva ingxoxo kwibhentshi.
Ndihlala ndinabafana beza kum ecaleni besithi, 'Yile nto yenzekayo xa udlalela iRaiders,' utshilo uPalmer.
I-Cornerback Lito Sheppard, omnye unyaka wokuqala we-Raider, unokubona umahluko.
Iyahlekisa indlela le midlalo ehamba ngayo kunye nezohlwayo ezibizwa kuthi, utshilo uSheppard. Abanye babo - uninzi lwabo - ngokuqinisekileyo sifanelwe. Kodwa ezinye zazo, awuzazi ukuba zivela phi. Siyazi ukuba kubonakala ngathi sohluke kancinane kunamanye amaqela kwaye siyayiqonda loo nto, kodwa ayizukubususa ubundlongondlongo bethu okanye indlela esiyidlala ngayo le midlalo.
Abahlaseli abazincedi ngokwabo ukuba banezohlwayo ze-58 zangaphambili, iimpazamo ezivela kwi-offsides ukuya kwi-incroachment ukuya kubuxoki ziqala ukufola ngokungekho mthethweni. Baye bafumana intlonti ezingama-29.
Ayikokuqala nje ubuxoki. Akunjalo ukubamba nje. Luhlobo lwendawo yonke, utshilo uPalmer. Ayisiyonto enye. Ayikho kwi-trend.
I-Cornerback Stanford Routt ibethelwe ngezohlwayo ezisibhozo (ukukhusela ukukhusela kunye nokuphazamiseka kokudlula) kwiiveki ezimbini ezidlulileyo kwaye ungumdlali we-NFL ohlawuliswa kakhulu kunye ne-16. Ngokutsho kwe-STATS, LLC, enye ngaphezu kwe-Green Bay Packers yokukhusela.
Andikhathali ngayo, utshilo uRoutt. Izohlwayo ziya kuza. Ngamanye amaxesha abayi kuza. Ndimane ndidlala. Awunakuxhalaba malunga nokuba i-refs icinga ntoni okanye yintoni abayenzayo ngenxa yokuba awukwazi ukulawula oko.
Uwiso lwasekunene uKhalif Barnes, ebotshelelwe ngomphini wasekhohlo uJared Veldheer onezohlwayo ezili-10 umntu ngamnye, wayisusa nayiphi na ingxoxo yeeflegi.
Andizukugxila kwizohlwayo kwixesha elidlulileyo, utshilo uBarnes. Andikhathali nokuba sinezohlwayo ezili-12 ukuba siphumelele, okanye ukuba sinesohlwayo esinye kwaye siphumelele. Ukuba siphumelele, ndilungile ngaloo nto.